बुटवल : पहिलो चरणको लकडाउन सकिएपछि पनि प्रशासनले गलत निर्णय गर्दा नेपाली अर्बाेै रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङकर आयातका लागि बैशाख यता करिव डेढ अर्व रुपैया बाहिरिएको हो । प्रशासनको निर्णयले चुनढुंगा ढुवानी बन्द भएपछि स्वदेशका क्लिङकर उद्योग बन्द भए । क्लिङकर अभाव भएपछि सिमेन्ट उद्योगले भारतबाट ल्याउन बाध्य भएका हुन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार बैशाख यता करिव डेढ अर्वको क्लिङकर आयात भएको छ । त्यसअघि भैरहवा भन्सारबाट आयात शुन्य रहेको थियो ।
पाल्पा जिल्ला प्रशासनले अहिले पनि चुनढुंगा ढुवानी रोकेको छ । २० जनभन्दा कम कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लालले गरेको काचो निर्णयले मुलुकलाई नै व्यापार नोक्सानी भएको छ । पाल्पाभन्दा कैयौ गुण बढी संक्रमित रहेको रुपन्देहीमा उद्योग, ढुवानी खुला रहेको छ । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गैरजिम्मेवार निर्णयले मुलुकलाई नै घाटा भएको भन्दै चर्काे आलोचना समेत भइरहेको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले कुनै पनि उद्योगको कच्चा पदार्थ ढुवानी बन्द गर्नु अव्यवहारिक भएको बताए । ‘यो त राष्ट्रलाई नै घाटा हुने निर्णय हो, उनले भने ।
पाल्पा जिल्लामा आधा दर्जनभन्दा बढी चुनढुंगा खानी रहेका छन् । ती खानीबाट यस क्षेत्रका चार उद्योगले क्लिङकर उत्पादन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय चारै उद्योग क्लिङकर उत्पादन बन्द गरेर बसेका छन् । सर्बाेत्तम सिमेन्टका प्रबन्धक अशोक कुमार ठाकुरले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर ढुवानी गर्छाै भन्दा पनि प्रशासनले रोकेको बताए । ‘कोरोना महामारी रहेको भारतबाट क्लिङकर ल्याउदा कोरोना नसर्ने र पाल्पाबाट नवलपरासी, रुपन्देही ल्याउदा कोरोना सर्ने हुन्छ र ? उनले प्रश्न गरे ।
पाल्पाको चुनढुंगाबाट सर्बाेत्तम, अर्घाखाची, पाल्पा, बुटवल सिमेन्टले क्लिङकर उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यहा उत्पादित क्लिङकर प्रयोग गरेर रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्छन । अहिले भारतबाट महंगोमा क्लिङकर आयात गर्नु परेको पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, भदौ १९, २०७७, १०:३२:०९
लामो दूरीका यातायात भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
आइतवार, भदौ १४, २०७७ आजको पोष्ट
मृत्युसँग लडिरहेछिन् दुर्गा, बचाउँने अभियानमा प्रमोद ! शनिवार, आश्विन ३, २०७७ 72